वाइसीएल रुकुम पश्चिमले बनायो पाँच विभाग कुन विभागको संयोजक को ?
सोमबार, असोज ४, २०७८ ०७:११:५८
वाइसीएल रुकुम पश्चिमले बनायो पाँच विभाग कुन विभागको संयोजक को ? रुकुम पश्चिम जिल्ला भेलाको लागि तयारी बैठक साउन २५ गते बस्ने ।
शनिबार, साउन ९, २०७८ कखरा संवाददाता
वाइसीएल रुकुम पश्चिमकाे कार्यालय बैठक ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र निकट युवा संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग वाइसीएल रुकुम पश्चिमले विभिन्न विभाग गठन गरेको छ । शनिबार बसेको कार्यालयको बैठकले संगठन, आर्थिक, अनुशासन, निर्वाचन र खेलकुद विभाग गठन गरेको हो । बैठकले संगठन विभागको प्रमुखमा लालबहादुर विष्ट, आर्थिक विभागको प्रमुखमा दलजित विक, अनुशासन विभागको प्रमुखमा विष्णु ओली, निर्वाचन विभागमा लक्ष्मण ओली र खेलकुद विभागको प्रमुखमा गोविन्द ओलीलाई तोकेको छ ।
कार्यालयको बैठकले जिल्ला भेला तयारीका लागि यही साउन २५ गतेका दिन जिल्ला समितिको पूर्ण बैठक डाकेको जिल्ला संयोजक जनककुमार विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट स्थित सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको हलमा जिल्ला समितिको पूर्ण बैठक बस्ने निर्णय भएको संयोजक विश्वकर्माले बताउनुभयो । बैठकले जिल्ला र राष्ट्रिय भेलाको तयारीलाई व्यापक बनाउने, त्यसका लागि सम्बन्धित पालिका समितिमा आवद्ध सदस्यलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले जिल्ला भित्रका नगर तथा गाउँपालिका, वडा र टोलका वाइसीएल भेला तथा बैठकहरु साउन २४ गते भित्रै गरी सक्ने निर्णय गरेको छ सबै सदस्यलाई सदस्यता वितरण तथा नविकरणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय भएको संयोजक विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज शैलेशकुमार शर्मा र केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य भुषण रावलको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ९, २०७८, १८:३८:००